Home Wararka Cali Geedi oo ka qayb-galayaasha shirkii Hawiye kala goostay $30,000 & Odoyaashii...
Cali Geedi oo ka qayb-galayaasha shirkii Hawiye kala goostay $30,000 & Odoyaashii oo dacweeyay
Shirkii uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ee lagu naqdinaayay ama looga soo horjeeday shirkii ay qabsadeen beelaha Hawiye ayaa buuq xoogle ka dhashay. Shirka oo uu soo qaban qaabiyay Cali Yare oo ka tirsan maamulka Gobolka Banadir ayaa waxa la sheegay in ay ku baxayso lacag lagu sheegay $83,000.
Shirka ayaa waxaa la isugu keenay qaar ka tirsan shaqaalaha dowlada, dad laga soo uruuriyay xaafadaha magaalada Muqdisho iyo rag horay uga tirsanaa jiray dagaal oogayaashii dalka soo maray. Shirka oo ahaa mid ay si wadajira u maamulyeen Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaaafinta iyo Gudoomiye ku Xigeenka Gobolka Banadir Cali Yare ayaa waxaa la lunsaday lacag badan oo lagu soo qaaday magaca shirka.
Cali Maxamed Geedi ayaa waxa loo xilsaaray in uu lacagtii loogu talagalay in loo qaybiyo odoyaasha dhaqanka ee Hawiye isaga loogu dhiibo. Cali ayaa lacagtii loo dhiibay isaga jeebka ku shubtay, ka kadibna waxa uu dansaday taleefanka.
Wasiir Cadaala oo ay odoyaasha u soo dacwoodeen una sheegeen in ayan lacag soo gaarin ayaa waxa uu wacay Cali Geedi laakeen Cali Geedi taleefanadisa waa dansaday. Waxa hada taagan dacwo iyo khalalaase ks dhashay kacagta laga dhacay odoyaashii shirka beenta ah ka qayb-galay.
Odoyaasha ayaa sheegay in ay maalinta Sabdiga ah ay shir jaraa’id qaban doonaan hadii Cali Geedi aan looga soo lacagtooda.